သင့်ရဲ့ အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းသွားစေမယ့် အစားအသောက် ဆယ်မျိုး – Shwe Yaung Lan
HomeNewsသင့်ရဲ့ အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းသွားစေမယ့် အစားအသောက် ဆယ်မျိုး
သင့်ရဲ့ အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းသွားစေမယ့် အစားအသောက် ဆယ်မျိုး
October 7, 2021 SYL News 0
အ ဆုတ် ကို သန့် စင် ပေး နိုင် ပြီး အား ကောင်း စေ သော အ စား အ စာ ( ၁ ၀ ) မျိုး….
( ၁ ) ကြက် သွန် ဖြူ…..
ကြက် သွန် ဖြူ ကal l i c i n ပါ ဝင် မှု မြင့် မား လို့ ရောင် ရမ်း မှု ကို လျော့ ကျ စေ နိုင် တဲ့ အ စွမ်း သ တ္တိ မျိုး စုံ ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊ ဒီ ဒြပ် ပေါင်း က ရော ဂါ ပိုး တွေ ကို ခု ခံ တိုက် ဖျက် ပေး ပြီး ရောင် ရမ်း မှု ကို လျော့ ကျ စေ ပါ တယ် ။
ကြက် သွန် ဖြူ က ပန်း နာ ရင် ကျပ် ကို သက် သာ စေ ပြီး အ ဆုတ် ကင် ဆာ ဖြစ် နိုင် ခြေ ကို လျော့ နည်း စေ နိုင် တယ် လို့ လက် ခံ ယူ ဆ ထား ကြ ပါ တယ် ။
( ၂ ) ချင်း….
ချင်း ( ဂျင်း ) က လည်း အ ရောင် ကျ စေ တဲ့ အာ နိ သင် ကြောင့် အ ဆုတ် ကို သန့် စင် စေ နိုင် ပါ တယ် ၊ ဟင်း ချက် တဲ့ အ ခါ ချင်း ကို နည်း နည်း ထည့် ချက် တာ ကောင်း ပါ တယ် ။
သံ ပ ရာ သီး နဲ့ ပေါင်း ပြီး ချင်း လက် ဖက် ရည် လည်း လုပ် သောက် လို့ ရ တယ် လေ ၊ အ သက် ရှူ လမ်း ကြောင်း မှာ အ ဆိပ် အ တောက် တွေ ဖယ် ရှား သန့် စင် ပေး နိုင် တဲ့ အ ပြင် လည် ချောင်း လည်း ရှင်း စေ နိုင် တယ် ။
( ၃ ) န နွင်း….
ချင်း နဲ့ ကြက် သွန် ဖြူ လို ပဲ ဟင်း ချက် ရာ မှာ ထည့် လို့ ရ တဲ့ အ စွမ်း ထက် ပ စ္စည်း က န နွင်း ပါ ၊ န နွင်း ရဲ့ အာ နိ သင် တွေ ကြောင့် အ ဆုတ် ကျန်း မာ ရေး ကို အ ထောက် အ ပံ့ ဖြစ် စေ ပါ တယ် ။
( ၄ ) ပန်း သီး…
ပန်း သီး မှာ ဗီ တာ မင် ဓာတ် တွေ အ စုံ အ လင် ပါ တဲ့ အ ပြင် အ သက် ရှူ လမ်း ကြောင်း စ နစ် ကို ကျန်း မာ စေ နိုင် တဲ့flav o n o ids တွေ ပါ ဝင် ပါ တယ် ။
သူ တို့ ကြောင့် အ မျိုး မျိုး သော အ ဆုတ် ရော ဂါ တွေ ကို ဖြစ် မ လာ အောင် ကာ ကွယ် နိုင် ပါ တယ် ။
( ၅ ) ဘယ် ရီ သီး….
ဘ လူး ဘယ် ရီ ၊ ဘ လက် ဘယ် ရီ နဲ့ ရက် စ ဘယ် ရီ အ သီး တွေ မှာ ဓာတ် တိုး ဆန့်ကျင် ပ စ္စည်း တွေ ကြွယ် ဝ ပါ တယ် ။
ဓာတ် တိုး ဆန့် ကျင် အာ နိ သင် တွေ ကြောင့် အ ဆုတ် ကင် ဆာ အ ပြင် တ ခြား ပိုး ဝင် ခြင်း နဲ့ ရော ဂါ တွေ ကို ဖြစ် နိုင် ခြေ လျော့ နည်း စေ ပါ တယ် ။
( ၆ ) ကမ္ဗလာ သီး….
က မ္ဗ လာ သီး ဟာ အ ဆုတ် ကို ပံ့ ပိုး တဲ့ ဗီ တာ မင် နဲ့ သ တ္တု ဓါတ် တွေ အ များ ကြီး ပါ ဝင် ပါ တယ် ။
အ ဆုတ် ကို ကင် ဆာ ဖြစ် စေ နိုင် တဲ့ အ ရာ တွေ ထိ တွေ့ လာ တဲ့ အ ခါ က မ္ဗ လာ သီး က အ ဆုတ် ကို သန့် စင် ပေး ပါ လိမ့် မယ် ။
( ၇ ) သ လဲ သီး….
သ လဲ သီး မှာ သ ဘာ ဝ အ စွမ်း အာ နိ သင် တွေ အ များ ကြီး ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊ သ လဲ သီး က အ ဆုတ် နဲ့ ပတ် သက် တဲ့ ပြဿ နာ တွေ ဖြစ် ပွား မှု ကို နှေး စေ ပြီး မြန် မြန် သက် သာ စေ နိုင် ပါ တယ် ။
( ၈ ) အ ခွံ မာ သီး ၊ အ စေ့ အ ဆန် တွေ နဲ့ ပဲ အ မျိုး မျိုး…
သူ တို့ တွေ မှာ ပန်း နာ ရင် ကျပ် ရှိ သူ တွေ အ တွက် လို အပ် တဲ့ မ ဂ္ဂ နီ ဆီ ယမ် တွေ အ များ ကြီး ပါ ဝင် ပါ တယ်။
၊ သူ တို့ က အ ဆုတ် ရဲ့ လုပ် ဆောင် နိုင် စွမ်း ကို ပို ကောင်း စေ ပြီး အ သက် ရှူ ရ ပို ကောင်း စေ ပါ တယ် ၊ ဥ ပ မာ P i s tac h i o s ဆို ရင် အ ဆုတ် ကင် ဆာ ကာ ကွယ် နိုင် တယ် ။
ကို လက် စ ထ ရော ကျ စေ တယ် လို့ သု တေ သ န တွေ့ ရှိ ထား ပါ တယ် ။
( ၉ ) ဂေါ် ဖီ ထုပ် မျိုး နွယ် တွေ…
ဂေါ် ဖီ ၊ ပန်း ဂေါ် ဖီ ၊ ပန်း ဂေါ် ဖီ စိမ်း တို့ လို မျိုး နွယ် တူ အုပ် စု က ဓါတ် တိုး ဆန့် ကျင် အာ နိ သင် တွေ အ ပြည့် အ ဝ ပါ ဝင် တာ ကြောင့် အ ဆုတ် အ ပါ အ ဝင် ခန္ဓာ ကိုယ် အ စိတ် အ ပိုင်း တွေ ကို အ ဆိပ် အ တောက် တွေ ကင်း အောင် သန့် စင် ပေး နိုင် ပါ တယ် ။
( ၁ ၀ ) car o ten o ids ကြွယ် ဝ တဲ့ အ စား အ စာ…
car o ten o ids ဆို တာ အ ဆုတ် ကင် ဆာ ကို ခု ခံ တိုက် ဖျက် ပေး နိုင် စွမ်း ရှိ ပါ တယ် ။
ဒီ ဓာတ် တိုး ဆန့် ကျင် ပ စ္စည်း ကို အ သီး အ နှံ တွေ နဲ့ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် တွေ မှာ တွေ့ တတ် တယ် ၊ သူ က ခန္ဓာ ကိုယ် ထဲ ရောက် တဲ့ အ ခါ ပန်း နာ ရင် ကျပ် အ တွက် အ ကျိုး ထိ ရောက် တဲ့ ဗီ တာ မင် အေ အ ဖြစ် ပြောင်း လဲ သွား ပါ တယ် ။
car o ten o ids ပါ ဝင် တဲ့ အ စား အ စာ တွေ က မုန် လာ ဥ နီ / ခ ရမ်း ချဉ် သီး / ဖ ရုံ သီး တို့ ပါ ဝင် ပါ တယ်။
နောက် ဆုံး အ နေ နဲ့ ပြော ချင် တာ က ရေ သောက် ပါ ၊ အ ဆိပ် အ တောက် ဖယ် ရှား သန့် စင် တဲ့ နေ ရာ မှာ ရေ က အ သုံး ဝင် ဆုံး ပါ ပဲ ၊ ဖျော် ရည် / အ ချို ရည် တွေ ထက် ရိုး ရိုး ရေ ကို ပဲ ရွေး ချယ် သင့် ပါ တယ် ။
အ ပေါ် မှာ ပြော ခဲ့ တဲ့ အ စား အ စာ တွေ ကို ပေါင်း စပ် စား သုံး မယ် / နေ့စဉ် အာ ဟာ ရ မှာ ထည့် သွင်း မယ် ဆို ရင် အ ဆိပ် အ တောက် ကင်း စင် ပြီး ကျန်း မာ နိုင် ဖို့ မ ဝေး တော့ ပါ ဘူး ။
ဘေဘီလုံမှာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်စာအုပ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အချက် ၇ ချက်
ပုဇွန်ဖမ်းနည်းတွေသာ သိရင် ပုဇွန်စားရဲတော့ မှာ မဟုတ်ဘူး